I-Semalt Expert ichaza indlela yokukhusela iDarodar Nginx
I-Darodar yindawo yokudlulisa i-spammer edumileyo ekugqibeleni i-akhawunti yeGoogle Analytics yamabhsayithi amancinci kunye namakhulu amakhulu aneendlela ezinobungozi kunye nobunjani. Ngelishwa, i-Google Analytics ayikwazi ukuyicoca ngokufanelekileyo, kwaye i-injini yakho yosesho ye-site yeyona ndawo iyancipha ngaphandle kwexesha. Ezinye i-webmasters ezikhungulukileyo kunye neeblogi ziye zathetha ngemisebenzi yaseDarodar, inikeza iinkcukacha malunga nendlela yokuyivimba. Kwaye iiplagizi ezimbalwa ze-WordPress ziye zaziswa ukuphelisa umzila weDarodar, kodwa nantsi indlela elula kwaye ebalaseleyo yokukhusela kwi-nginx.
Ngale ndlela inikezelwe ngumcebisi ophezulu Semalt , uJulia Vashneva, unokufumana impindezelo encinci kwi-spammers - nova web designs.
Yintoni omele uyivimbele?
Into yokuqala kukuchonga ukuba ngubani ofuna ukumvimba. Kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics, unokwenza iiparamitha ezintsha kwaye ukhangele umgangatho wezithuthi zakho. Kufuneka uqiniseke ukuba unokuphelisa ukutyelela ngexesha elide leeseshoni kunye ne-100%. Ngokudabukisayo, i-botnets efana neDarodar.com inzima ukujongana njengoko i-bots kunye nezigulane zikhona kwi-intanethi.
Kufuneka ufumane uluhlu lweewebhusayithi ezingenakufumana i-fake traffic. Akunjalo lula ngakumbi xa unenani elikhulu lewebhu. Lungisa uluhlu ngamagama eesayithi ekufumaneni ugaxekile logaxekile, kwaye unqume ukuba yiyiphi into ofuna ukuyivimba. Iziphambili eziphambili esizifumene ukuba kufuneka zifake kwiluhlu lwakho ziintlobo--you-website.com, darodar.com, hulfingtonpost.com, priceg..com, ilovevitaly.co, forum20.smailik.org, blackhatworth.com, kunye ne----6-o-o.com. Kufanele uvalise zonke ezi website ukuze ukhusele iingxelo zakho ze-Google Analytics.
Kufuneka ukhumbule ukuba iDarodar.com ayiyi kuhlonipha i-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye ayiyikuphulaphula i-robots.txt. Yingakho kufuneka uhambise izibhenkco zabo kunye ne-bots kwiwebhusayithi yabo kunye ne-messaging nge-akhawunti yabo ye-Google Analytics ngokusebenzisa iikhowudi ezikhethekileyo. Ngaphandle koko, ungasebenzisa iinkonzo ze-URL zokunciphisa (shadyurl.com) zokuzibuyisela kwakhona kwii-URL ezingalindelekanga, ukudibanisa i-Google Analytics kwizinga eliphezulu.
Ukuthetha ngokunyanisekileyo, basenokungabikho kuvela kubakhi kunye nabenzi beDarodar, kodwa kufuneka uhambise i-traffic yabo ukukhusela iwebhusayithi yakho kwi-intanethi. Ngenxa yesimo sengqondo esingenakuphulukiswa kwi-Facebook kunye ne-Twitter, akufanele uzive ungalunganga okanye unetyala. Kunokwenzeka ukusetha izitatimende ngabanye kubo bonke abathumelayo, ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho kwiziphumo zeenjini zokukhangela.
Hlola yonke into ngokufanelekileyo
Ekugqibeleni kodwa kungeyona encinci, kufuneka uvavanye yonke into ngokufanelekileyo. Ekubeni ulahlekisile iifayile ze-nginx config, kukulungele ukuvavanya ukuba uye wavala ukuba ufuna ukuthintela okanye cha. Kubalulekile ukuba ungadala imifutshane yamanga. Kunoko, kufuneka ugxininise ukuvimba iDarodar kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics.
Emva kokumisela ukulungiswa kunye neziphene, kufuneka usebenzise isixhobo soBume besiSebenzi ukujonga iimpendulo zeseva kumacandelo amaninzi okuthunyelwa. Ukuba unomnye umqondo engqondweni yakho kwaye ufuna ukwabelana nathi, ungalibali ukusilahla i-imeyile okanye izimvo kwibhokisi ingezantsi.